Estera 6 - Ny Baiboly
Estera toko 6
Amanà voatery hanome voninahitra an'i Mardokea.
1Ny alin'izay, tsy nety nahita tory ny mpanjaka, ka nasainy alaina ny bokin'ny tetiarana dia ny Tantara, dia novakina teo anatrehan'ny mpanjaka izany; 2ka sendra ny filazana ny nanambaran'i Mardokea ny momba an'i Bagatàna sy Taresa, ireo roa lahy eonokan'ny mpanjaka, mpiambina ny lapa, izay nitady hamono an'i Asoerosa mpanjaka. 3Ka hoy ny mpanjaka: Inona moa no mba mari-boninahitra amam-pisandratana efa nomena an'i Mardokea, noho izany? - Tsy mbola misy nomena azy na kely akory aza, hoy ny mpanompon'ny mpanjaka izay nanana anjara raharaha teo aminy. 4Dia hoy ny mpanjaka: Iza no ao an-kianja? - Amanà izany, efa tonga tao an-kianja ivelan'ny tranon'ny mpanjaka, hangataka amin'ny mpanjaka ny hanantonana an'i Mardokea eo amin'ilay hazo efa namboariny ho azy. 5Ka hoy ireto mpanompon'ny mpanjaka namaly azy: Amanà io mitoetra ao an-kianja io. Dia hoy ny mpanjaka: Aoka hiditra izy.
6Nony niditra Amanà, dia hoy ny mpanjaka taminy: Inona no tokony hatao amin'izay olona tian'ny mpanjaka homem-boninahitra? Ary hoy Amanà anakampo: Iza indray moa no ho tian'ny mpanjaka homem-boninahitra eo, afa-tsy izaho. 7Ka dia hoy Amanà tamin'ny mpanjaka: Ny hatao amin'ny olona tian'ny mpanjaka homem-boninahitra, 8dia tokony halaina ny akanjo fiandrianana efa niakanjoan'ny mpanjaka, ary asiana satro-boninahitra fiandrianana ny lohany, 9dia atolotra ny iray amin'ireo lehiben'ny mpanjaka ambony izany fitafiana sy soavaly izany, dia hampiankanjoana an'izay olona tian'ny mpanjaka homem-boninahitra, sy hitondrana azy mitaingin-tsoavaly mamaky ny kianjan'ny tanàna, ary hiantsoany eo alohany hoe: Toy izao no atao amin'izay olona tian'ny mpanjaka homem-boninahitra! 10Dia hoy ny mpanjaka tamin'i Amanà: Alaonao faingana ary ny fitafiana sy ny soavaly araka ny voalazanao, ka ataovy izany amin'i Mardokea ilay Jody, mipetraka ao am-bavahadin'ny mpanjaka, aza asiana latsaka izay rehetra voalazanao. 11Koa nalain'i Amanà ny akanjo sy ny soavaly dia nampiakanjo an'i Mardokea izy, sy nitondra azy mitaingin-tsoavaly mamaky ny kianjan'ny tanàna, ary niantso teo alohany hoe: Toy izao no atao amin'ny olona tian'ny mpanjaka homem-boninahitra.
12Dia niverina nankeo am-bavahadin'ny mpanjaka Mardokea; ary Amanà dia nody faingana nankany aminy, niferin'aina, nisaron-doha, 13nitantara izay rehetra nanjo azy tamin'i Zaresa vadiny sy ireo sakaizany rehetra. Ary hoy ny olon-kendriny sy Zaresa vadiny taminy: Raha avy amin'ny taranaky ny Jody Mardokea, izay efa niantomboka nahalavo anao teo anatrehany sahady, dia tsy ho azonao asiana na inona na inona, fa hianao mihitsy no ho lavo eo anatrehany. 14Mbola miteny aminy eo izy ireo dia indreo tonga ny eonokan'ny mpanjaka, ka nitondra faingana an'i Amanà ho any amin'ny fanasana namboarin'i Estera. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.1434 seconds